टिकटकबाट चिनजानपछि युवतीलाई होटेलमा बोलाएर…
युवतीमाथि कर णी पछि लु टपा ट गरेको आ'रोपमा सुनसरी प्रह'रीले १ पुरुषलाई पक्रा'उ गरेको छ । भिडियो शेयरिङ सोसियल नेटवर्क टिकटकबाट चिनजान भएकी युव'तीलाई होटलमा बोलाइ कर णी पछि लु टपा ट गरेको आरो:पमा प्रह'रीले कास्कीका पुरुषलाई इटहरीमा प'क्राउ गरेको हो । पीडि'त युवतीको उजु'रीका आधारमा इलाका प्रह'री कार्यालय इटहरीको टोलीले पक्रा'उ गरेको हो । पक्रा'उ पर्नेमा कास्कीको कास्कीकोट गाउँपालिका–४ का ३९ वर्षीय राजीव गुरुङ छन् । प्रह'रीका अनुसार राजीवले टिकटकमार्फत चिनजान भएकी युवतीलाई भेट्न भनेर इटहरीस्थित होटलमा बोलाएका थिए । होटेलमा २ दिनसम्म युवती'माथि कर णी गरेर राजीव पी डित युवतीकै गरगह'ना र पैसा लिएर फ'रार भएका प्रह'रीको भनाइ छ । कास्कीबाट गत माघ २५ गते इट'हरी आएका गुरुङ इटहरी उपमहानगरपालिका– ९ स्थित आरआर होटलमा २ दिन बसेका थिए । होटलमा भेट्न बोलाएकी युवती बा'थरुम गएको बेला गुरुङ माघ २७ गत
सडकमा नाङ’गो मान्छे दौडिए, पछिपछि प्रह’रीको दौडा’दौड..हेर्नु’होस्
राजधानीको सडकमा एक जना स'र्वाङ्ग ना'ङगो मान्छे दौडिएपछि उनलाई समात्नको लागि पु'लिस पछिपछि दौडिएको रोचक घ:टना अहिले चर्चामा छन् । सडकमा ती व्यक्ति ना:ङ्गै दौडिइरहेको दे:खेपछि स्थानीयले पु'लिसलाई बोलाएका थिए । पुलि'स आएपछि २९ वर्षका रस स्प्रङहाम अघिअघि र पुलिस पछिप:छि दौडिएका थिए । तीन जना पुलिस अधिका:रीहरुले रसलाई लखे'टिरहेका थिए । द सनक अनुसार पश्चिम लण्डनको नटिङ हिलमा भएको यो अनौ'ठो खेदाइलाई ३९ वर्षीय डे:लिभरी साइकल चालक पेड्रो लुलाले भिडि'यो खिचेका थिए। उनले भने– ‘म बाइकमा थिएँ, मैले माथि हेरें र एक जना ना:ङ्गो मानिस दौडि:रहेको देखें ।’ मेट पु'लिसका एक प्रवक्ताले भने ‘एक जना मानिस सडकमा ना'ङ्गै हिँडिरहेको रिपोर्ट आएपछि आइतबार, फेब्रुअरी २१ का दिन वेस्टवे बीटुमा प्रहरी:लाई बोलाइएको थियो । अफिसरहरू र लण्डन एम्बु'लेन्स सेवा पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।’ लण्डन एम्बुलेन्स सर्भिसले उनलाई स
प्र’हरी हि’रासतमा रहेका विनयको मोबाइल प्रह’रीले खोलेर हेर्दा यस्ता तस्बिर भेटिएपछि…..
बीबीसीले सार्वज'निक गरेको विश्वका सय प्रभाव शाली महिला सन् २०२०० को सूचीमा परेकी सपना रोकाले दिएको उ'जुरीका आधारमा पक्रा'उ परेका विन'यजंग बस्नेतको मोवा'इलमा सपनाका नराम्रा तस्बिर फेला परेका छन् । प्र'हरीले सपनाका ति तस्बिर विनयजंगले कसरी प्राप्त गरे भन्ने विषयमा थप अनु'सन्धान सुरु गरेको छ । वेवारिसे श'व ब्यवस्थापनमा केही सम:य संगै काम गरेकी सपनाका बारेमा विनयजंगले अनावश्यक टिप्पणी गर्दै अ श्लि ल तस्बिर आफु'संग भएको र त्यो सार्व:जनिक गरिदिने चेता'वनी दिएपछि सपनाले उजुरी दिएकी थिइन् । विनयको नेतृत्वमा रहेको बेवारिसे श'व व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रमा रहेर सपना बेवारिसे श'व ब्यवस्थानको काम गर्थिन्। उनी विन'यलाई बुबा भन्थिन्। विनयले पनि छोरी नै भनेर चिना:उँने गरेका थिए । तर एकाएक उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रियो। सपनाले पनि आफ्नै संस्था दर्ता गरेर त्यस्तै काम अघि बढाउन थालिन् । त्यस पछि
प्रचण्ड-नेपाल समुहका नेता एवम् पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई सवार गाडी'ले ठक्क'र दिँदा एक साइकल यात्री घा'इते भएको छन् । आइतबार जनकपु'रबाट हेटौडातर्फ आउदै गर्दा रौतहटको चन्द्रनिगा:हापुरमा नेता भट्टराई सवार ज १ झ ४२७ नम्बरको गाडिले ५५ वर्षीय इन्द्रप्रसाद घिमिरेलाई ठक्क:र दिएको रौतहट प्रह:रीले जानकारी दिएको छ । करिब ७ बजेतिर साईकल'मा सवार रहेका घिमिरेलाई ठक्क'र दिएको प्रह'रीको भनाइ छ । घिमिरेको स्थानीय अस्प'तालमा उप'चार अस'म्भव भएपछि काठमाडौं रेफर गरिएको बता'इएको छ । - न्यूज२४ नेपाल
‘काकाबाट बला’त्कृत भएँ’ भन्दै बचा’उन फेसबुकबाट किशोरी गरिन् सहयोगको अपील… हेर्नु’होस्
काठमाडौंको साँखु घर भएकी १८ वर्षीया किशो'रीले एकाघरका पुरुषबाट आफू बला'त्कृत भएको भन्दै सहयोगको याचना गरेकी छिन् । सामा:जिक संजाल (फेसबुक)मा लामो स्ट्या:टस लेखेर उनले आफ्नै काकाले ब:ला'त्कार गरेको आरो:प लगाएकी छिन् । एक वर्ष पहिले आफ्नै काकाले दुई पटक ब:ला'त्कार गरेको आ'रोप लगाउँदै उनले भनेकी छिन्, ‘उसले मलाई त्यसबारे कसैलाई नभन्न ध'म्की दिएको थियो तर, बु:बालाई भनेँ, उहाँले पारिवा'रिक कुरा भएको हुनाले बाहिर नभन्न भन्नुभो ।’ ब'लात्का:र आरो'पीले अहिले फिनल्यान्डमा रहेको र आ:फूलाई पनि त्यही लैजान खोजेको पी:डितले बताएकी छिन् । सामाजिक संजालमा सो कुरा सार्वजनिक गरेप'छि आफ्नो ज्यान ख:तरामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफू'लाई घर बाहिर निकाल्न आग्रह गरेकी छिन् । संजालमा प्रह'रीकहाँ जाहेरी दिन आग्रह गरेर थुप्रै कमेन्ट गरि'एका छन् ।घट'नाबारे प्रहरीले अनु'सन्धान शुरु गरेको छ । महा'नगरीय प्र'हरी
लाइभ कार्यक्रम चलाइरहेका पत्रकारलाई बन्दु’क तेर्स्याइयो, यसरी लुटि’यो (भिडियो सहित)
इक्वेडरका एक टेलिभिजन रि:पोर्टर र उनको क्यामेरा ‘क्रू’ लुटपा:टमा परेका छन् । त्यो पनि लाइभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिर:हेका बेला । मास्क लगाए'का एक लुटेराले १२ फेब्रुअरीमा डिएगो ओर्डि'नोलालाई बन्दुक तेर्स्याएका हुन् । इक्वेडरको डाइ:रेक टिभी स्पोर्टस्का यी रिपो'र्टर उक्त दिन इसिड्रो रोमियो कार्बो मोनुमेन्टल रंगशालाबाहिर रिर्पोटि:ङ गर्दै थिए, यो रंगशाला स्थानीय बार्सिलोना एससी फुटब:ल क्लबको गृह मैदान हो । यति नै बेला बेसवल क्याप र अनुहा:रमा मास्क लगा:एका एक व्यक्ति उनीसा'मु आएर बन्दु:क तेर्स्याए । यी बन्दुकधा:रीहरुले क्रूका सदस्य:हरुसँग टेलिफो:नहरू मागे । त्यस:पछि क्रूका एक सदस्यले आफ्नो स्मार्टफोन दिए । त्यो स्मार्टफोन बोकेर उनी टोली:लाई स्तब्ध पार्दै भागे । ओर्डिनो:लाले ट्वीटर:मा शेयर गरेपछि यो भिडियो भा:इरल बनेको छ। ‘हामी शान्त:सँग काम गर्न पनि सक्दैनौ । आज १ बजे मोनुमेन्टल रंगशा
छुट्टीमा घर आएका २२ वर्षीय ईण्डियन आर्मी विवेकको बाइक दु’र्घटनामा नि’धन
तनहुँको व्यास २ मालेबगर निवा'सी विवेक थापा मगरको मोटर'साइकल दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । दमौ'लीबाट घाँसीकुवातर्फ जाँदै गरेको ग १९ प २७३ नम्बरको मोटर'साइकल रोडमै प ल्टिँ दा २२ व'र्षीय विवेक ज्या'न गएको हो । टाउकोमा चो ट ला गेका उन'लाई दमौली अस्पताल लागि:एकोमा चिकित्सकले मृ त घोष'णा गरेको बताइएको छ । बाइक पछाडि सवार २० वर्षीया रजनी गुरुङको दमौलीमा उप:चार भईरहेको छ । सडक चि'प्लो भएकाले मोटर:साइकल अनि:यन्त्रित भएर दु'र्घटना भएको आशंका गरिएको छ । थापा ईन्डियन आ'र्मी रहेको र ४४ दिनको छुट्टिमा घर आए'को बताइन्छ । केही वर्ष अघि सोहि ठाउँ नजिकै २ जना ई'ण्डियन आर्मी युव'कको पनि बाइक दुर्घट'नामा नि'धन भएको थियो । तस्विरः सुमन श्रेष्ठको फेसबुकबाट यो पनि... तनहुँको व्यास नगरपालिकामा मोटरसाइकल दुर्घ'टनामा युवकको नि धन पृथ्वीराज'मार्गअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगर'पालिका–२ बुल्दी पुल नजिक गए राति भएक
खुशीको खबर: नेपाली चेली सृजना अमेरिकन आर्मिको उच्च पदमा छनोट हुन सफल…
सृजना राना मगर धरानमा बसोबास गर्दै आएका थिईन। सानै देखि आर्मी बन्नमा रुचि भएको सृजनाले धरानमा आफ्नो +2 को अध्ययन पूरा गरे पछि नेपाल आर्मिको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पदको लागि भर्ती लाग्न प्रयास गरिन तर असफल भएपछि उसले आफ्नो ब्याचलर को पढाइ अघि बढाउदै जादा उसलाई डिभि परेर सृजना अमेरिका गईन। अमेरिकामा गएर उसले गोप्य रुपमा परिवारलाई पनि नभनी अमेरिकन आर्मिमा निबेदन दिए र सफल भए पछि परिवारलाई जानकारी गराए। उसको आर्मी बन्ने रहरसाहस र संकल्पलाई गोर्खा कम्पनी ट्रेनिङ लाई सलाम गर्दछ। बैनि सृजनालाई अमेरिकन आर्मिमा अझै सफलता प्राप्तीका लागि शुभकामना ब्यक्त गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौ! यो अर्को फरक प्रसङ्गको समाचार पनि पढौं :प्रेम गरेर विवा'ह गरेकी श्रीमतीले छो,डेर गएपछि.. श्रीमती माडवारीको घरमा काम गर्ने गर्थिन । श्रीमानलाई पनि चासो लाग्यो कस्तो घरमा काम गर्ने रहेछन् श्री'मतीले ? त्यसपछि उनले आफ
पुण्य गौतम अब हिरो बन्दै, शुटिङमा हसाउनु हसाए…. (भिडियो सहित )
पुण्य गौतम अब हिरो बन्दै,यस्तो रमाइलो गरे शुटिङमा हसाउनु हसाए,सधै मिडि:यामा छा'इरहने चिर परिचित नाम हो पुण्य गौतम । हरेक बिषयमा बोल्न प्रखर पनि छन उनि । मिडिया'ले खोज्ने बयक्ती हुन पुण्य गौतम । समा:जिक अभि'यन्ता समेत रहे'का पुण्य प्राय बि,बादमा पनि आइरहन्छन जानी नजानी प्राय जसो, उनि भर्खर मात्र खाना खाने होट:लको बारेमा चर्चामा थिए । यिनै पुण्य गौतम अब शर्ट मुभीमा मुख्य पात्रको रुपमा आउँदै छन । सम,सामायिक घट,नामा आधारित हुने शर्ट मुभी'मा पुण्य आफ्नो रियल पात्रमा अभिनय गर्दै छन । उक्त शर्ट मुभीको नाम पनि पुण्य गौतम नै रहेको छ, निर्देश'कले भने मु'भीमा उनको बोल्ने थेगो सबै प्र'योग हुनेछ उनले भने यो हाम्रो टिम वर्क हो यदी यो शर्ट मुभी सफल भएमा हामी हरेक प्रोजेक्टमा पुण्य गौतम'लाई अनुब,न्धित गर्छौ । भिडि:यो हेर्नुहो'स
घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहो’स्
स्थानीय बजा'रमा आज पहेँलो धातु'को मूल्य रु ५०० ले ओरालो लागेको छ। अघिल्लो साता पनि ओरालो लागेको सुन आज साता'को पहिलो दिन नै तोलामा रु ५०० ले घटे'को हो। नेपाल सुनचाँदी व्यव:सायी महासङ्घका अनुसार छापा'वाल सुन प्रतितोला रु ८८ हजार ३०० मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ । शुक्रबार छापावाला सुन तोला'मा रु ८८ हजार ८०० मा कारोवार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा रु ८७ हजार ८५० मा कारो'वार हुने गरी मूल्य नि'र्धारण भएको छ। शुक्र'बार तेजाबी सुन तोलामा रु ८८ हजार ३५० मा कारोवार भएको थियो। यस्तै चाँदी आज तो'लामा रु १० ले घटे'को छ । शुक्र'बार तोलामा रु एक हजार ३३५ मा कारो'वार भएको चाँदी आज भने रु एक हजार ३२५ मा कारो'वार हुने गरी मूल्य निर्धा:रण भएको छ।
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (63588)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (61082)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (52096)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50839)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (49809)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46572)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (46500)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमीसहित फेला परिन हराएकी लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (41419)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (38641)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33761)